Yeyiphi eyona ndawo intle yeDanube Cycle Path? > Ngebhayisekile
↓ Tsibela kumxholo oyintloko
Ngoku i-Danube Cycle Path
Inqanaba lesi-5 iMelk-Krems
Intwasahlobo kwiNdlela yeBhayisikile yaseDanube eWachau
Iapilkosi iyadubula eWachau
Umonakalo wesakhiwo esingasemva
Yintoni iNdlela yeBhayisikile yaseDanube?
I-Danube ngumlambo wesibini ubude eYurophu. Iphuma eJamani kwaye iqukuqela kuLwandle Olumnyama.
Kukho indlela yomjikelo ecaleni kweDanube, indlela yebhayisikile yaseDanube.
Xa sithetha ngeDanube Cycle Path, sihlala sithetha eyona ndlela ihanjwe kakhulu ukusuka ePassau ukuya eVienna. Elona candelo lihle kakhulu lale ndlela yomjikelo ecaleni kweDanube iseWachau. Icandelo elisuka eSpitz ukuya eWeissenkirchen laziwa njengentliziyo yeWachau.
Uhambo oluvela ePassau ukuya eVienna luhlala luhlulwe lube ngamanqanaba angama-7, umyinge we-50 km ngosuku.
Ubuhle be-Danube Cycle Path
Ukukhwela ibhayisekile kwiNdlela yeBhayisikile yaseDanube kuyamangalisa.
Kuhle ngakumbi ukujikeleza ngokuthe ngqo kumlambo oqukuqelayo, umzekelo eWachau kunxweme olusemazantsi eDanube ukusuka eAggsbach-Dorf ukuya eBacharnsdorf, okanye ngeAu ukusuka eSchönbühel ukuya eAggsbach-Dorf.
kwiintsuku ezisi-7 Passau Vienna
Endleleni kwi-Danube Cycle Path
Ukukhwela ibhayisekile okukhuselekileyo (abakhweli beebhayisikile baphila ngokuyingozi)